एक विद्यार्थी पढाउन ३ शिक्षक ! | EduKhabar
एक विद्यार्थी पढाउन ३ शिक्षक !
काठमाडौं २८ माघ / लमजुङ बेसीसहर नगरपालिका १० बाँझाखेत साँघुको बुद्धिविकास प्राथामिक विद्यालयमा १ जनामात्रै विद्यार्थी छन्। ३ जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको यहाँ विद्यार्थी संख्या बढ्न नसकेको धेरै वर्ष भयो।
बेसीशहर-१० खाँचेको गणेश प्राविको अवस्था पनि उस्तै छ। यहाँ ३ शिक्षकले २ जना विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। मस्र्याङ्दी-३, खुदी अर्खलेबेसीको जनचेतना प्राविमा पनि २ जनामात्र विद्यार्थी छन्।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङका शाखा अधिकृत बाबुराम बरालका अनुसार राइनास नगरपालिकाको मोहोरियाकोटको वीरेन्द्र शान्ति प्राविमा ३ जना, मस्र्याङ्दी-६ बाहुनडाँडा डहरेको हिमालय प्राविमा ३ जना, सुन्दरबजार नगरपालिकाको कुन्छास्थित बालविकास प्राविमा ४ जना मात्र विद्यार्थी छन्।
मस्र्याङ्दी-१ घनपोखरा घोप्टेस्थित विद्याज्योति प्राविमा ४ जना, घिम्राङको जनकल्याण प्राविमा ५ जना, खुदी जिम्दुको देउराली प्राविमा ५ जना विद्यार्थी छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङका अनुसार १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयको संख्या ५६ छ। जिल्लाका ३४९ विद्यालयमध्ये करिब डेढसय विद्यालययमा मुस्किलले २० जनासम्म विद्यार्थी रहेको शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।
गाउँबाट सहर बसाइसराइ गर्ने क्रम बढ्नु र सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयतिर आकर्षित हुुनुका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ। शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी बरालका अनुसार सामुदायिक विद्यालयबाट वर्षेनी ४ हजार विद्यार्थी घटिरहेका छन्।
यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई मर्ज (गाभ्ने) तयारी गरे पनि सफल भएको छैन। विभिन्न शिक्षक संगठन र राजनीतिक दलहरूले सहयोग नगर्दा त्यतिबेला विद्यालय मर्ज हुन सकेका थिएनन्।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले विद्यार्थी संख्या कम भएका जिल्लाका १४१ विद्यालयलाई एकैसाथ पत्र लेखी विद्यालयहरू गाभ्ने तयारी गरेका थिए। त्यतिबेला माध्यमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अपुग भएमा दरवन्दी काट्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
१ देखि ५ कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा २५ र १ देखि ३ कक्षा सम्म सञ्चालन भएकोे विद्यालयमा कम्तीमा २० जना विद्यार्थी पु¥याउन शिक्षा कार्यालयले बाराम्बार पत्राचार गरे पनि विद्यार्थी संख्या बढ्नुको सट्टा घट्दै गएका छन्। यसअघि विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका लमजुङका २० विद्यालय गाभिएको थियो भने १० विद्यालयको तह घटाइएको थियो।
नविनराज कुइँकेलले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।